အကောင်းဆုံး Protable ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |Macpex
မော်ဒယ် MB-25 MB-35 MB-60 MB-90
သီအို စွမ်းရည်/နာရီ 25 35 60 90
Mixer ပါ။ ၅၀၀ ၇၅၀ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀
ပါဝါ 60kw 80kw 100kw 210kw
Discharge အမြင့် 3.8m 3.8m 3.8m 3.8m
Macpex မိုဘိုင်းကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံကို ဆွဲငင်အမျိုးအစားနှင့် နောက်တွဲအမျိုးအစား ခွဲခြားထားသည်။နောက်တွဲ အမျိုးအစား ကိုယ်ထည်တွင် ရှေ့ နှင့် နောက် axles အပြည့်အစုံ ပါ၀င်သည် ။ဆွဲငင်အားကိုယ်ထည်တွင် နောက်ပုဆိန်သာရှိပြီး ရှေ့ဆုံးကို လယ်ထွန်စက်ကုန်းနှီးတွင် ထည့်ထားသည်။
1. လွှဲပြောင်းစဉ်အတွင်း အမြန် disassembly နှင့် အဆင်ပြေသောရွေ့လျားမှု- ဝက်အူ conveyor နှင့် ဘိလပ်မြေပုံးမှလွဲ၍၊ ရောစပ်စက်ရုံတစ်ခုလုံး၏ ရှေ့ဆုံးကို ဆွဲငင်ရွှေ့နိုင်သည်။အခြားသူများအတွက်၊ လမ်းလျှောက်ပလပ်ဖောင်းနှင့် အထပ်မြင့်ပန်းကန်ကို ခေါက်ထားပါက ထိန်းချုပ်ကြိုးများအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန် မလိုအပ်ပါ။ဖယ်ရှားထားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဘူတာရုံတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။မိုဘိုင်းရောစပ်စက်ရုံတွင် တာယာများ၊ ဆွဲကြိုးများ၊ အချက်ပြကိရိယာများနှင့် ဘရိတ်စနစ်များ တပ်ဆင်ထားသည်။နောက်တွဲယာဉ်၏ အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသော အမြန်နှုန်းသည် 40 ကီလိုမီတာ/နာရီအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
2. တပ်ဆင်နေစဉ်- မြေသားသည် ပြားပြီး အစိုင်အခဲဖြစ်နေပါက အုတ်မြစ်ချရန် မလိုအပ်ဘဲ တင်းကျပ်သော ဆောက်လုပ်ရေးကာလရှိ ယူနစ်များအတွက် အလွန်သင့်လျော်သည့် နေ့ချင်းညချင်း ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
3. သိုလှောင်မှု- စက်ပစ္စည်းများကို ယာယီအသုံးမပြုပါက၊ လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်စဉ်အတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
1. ပင်မအင်ဂျင်ကိုယ်ထည်- နောက်တွဲထရပ်ကား၏ traction pin နှင့် ပါကင်ခြေထောက်ပါရှိသော cantilever ပုံစံဖြင့် ရောစပ်ထားသော ပင်မအင်ဂျင်ကိုယ်ထည်၊ရောစပ်စက်၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ရေရောစပ်မှု၏ အတိုင်းအတာကို ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် ထားရှိသည်။လှည့်ကင်းလမ်းလျှောက် ပလက်ဖောင်း လက်ရန်း စသည်တို့ကို ဝိုင်းရံထားသည်။
2. ထိန်းချုပ်ခန်း- ထိန်းချုပ်ခန်းသည် ပင်မစက်၏ကိုယ်ထည်အောက်ခြေတွင်ရှိပြီး ရောစပ်စက်ရုံ၏ အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် တပ်ဆင်ထားသည်။ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ပုံသေရောစပ်စက်ရုံနှင့် တူညီသည်။အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေတွင်၊ ထိန်းချုပ်ခန်းကို ဘူတာရုံတစ်ခုလုံး၏ ရှေ့ဘက်ထောက်မှတ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။လွှဲပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း၊ ထိန်းချုပ်ခန်းကို ပံ့ပိုးမှုတွင် နေရာလပ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းများအားလုံးကို disassembled ရန်မလိုအပ်ပါ။
3. အစုလိုက်အသုတ်လိုက်တိုင်းတာခြင်း- ဤစနစ်သည် ဘူတာရုံတစ်ခုလုံး၏နောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး အပေါ်ပိုင်းတွင် စုစည်းမှု (သဲနှင့်ကျောက်) သိုလှောင်မှု hopper ဖြစ်သည်။သိုလှောင်မှု hopper ကို ၂ ကွက် သို့မဟုတ် ၄ ခု ခွဲခြားနိုင်ပြီး သိုလှောင်မှုပမာဏကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အမြင့်ပြားတစ်ခုအား သတ်မှတ်ထားသည်။တံခါးကို အလှည့်အပြောင်းတွင် လေဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။အစုလိုက်တိုင်းတာခြင်းဆိုသည်မှာ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ စုစည်းတိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အောက်ခြေတွင် လမ်းလျှောက်နောက်ပုဆိန်နှင့် ဘောင်ခြေထောက်များ တပ်ဆင်ထားသည်။
4. Belt conveyor frame- ဘောင်သည် host chassis နှင့် aggregate batching frame ၊ အတွင်းတွင် ခါးပတ်ဘောင်တစ်ခုပါရှိသော truss structural member တစ်ခုဖြစ်သည်။ပင်မဘောင်၊ ခါးပတ်ဘောင်နှင့် သုတ်ဘောင်များကို မိုဘိုင်းရောစပ်စက်ရုံတစ်ခုလုံး၏ ပင်မဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
5. Peripheral အစိတ်အပိုင်းများ- ဘိလပ်မြေ silo နှင့် screw conveyor ။အရံအစိတ်အပိုင်းများသည် ဖြုတ်တပ်ခြင်းမပြုဘဲ လည်ပတ်နေစဉ် သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွင်း အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပြီး တစ်ခုလုံးကို ဖြုတ်တပ်နိုင်သည်။
6. ရောစပ်စက်- JS အမျိုးအစား အတင်းအကျပ် ရောနှောခြင်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုထားသောကြောင့် အရည်နှင့် ခြောက်သွေ့ပြီး မာကျောသော ကွန်ကရစ်ကို လျင်မြန်စွာ အညီအမျှ ရောနှောနိုင်သည်။
ယခင်- ထရပ်ကားပန့်ဖြင့် စန်းပွင့်သည်။
ရုတ်သိမ်းထားသော HZS75 ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံကို ကျော်ပါ။